शनिबार, २१ भदाै
बेइमान शहरमा सोझो गाउँले २१ भदौ २०७६
तर, नमरेको प्रहर हुँदैन ! हो, मर्ने रहर नहुँदा–नहुँदै पनि उनका अभिभावकको मृत्यु भयो । सीता जन्मनेबित्तिकै बुबाले संसार छाडे । त्यसको दुई वर्षपछि आमाको मृत्यु भयो । बाल्यकालमै उनी बेसहारा भइन् । २१ भदौ २०७६
म ह्याक हुन चाहन्छु मलाई थाहा छ । मान्छेहरू मौकाको पर्खाइमा हुन्छन् । कुनै न कुनै त्यस्तो समयको, जुन समयले उनीहरूको सबै इच्छा र चाहना पूरा गरिदेओस् । आफ्ना सबै सपना पूरा गरिदेओस् र जीवनलाई धन्य बनाइदेओस् । २१ भदौ २०७६
फोक्सुण्डोले मताएको त्यो दिन ! ‘ओ माइ गड् ! हामी हिँड्दै थियौं, म कराइहालें । कारण थियो, फोक्सुण्डोकोे रङ । एकैछिनमा फोक्सुण्डो पत्याउनै नसक्ने गरी फेरिइसकेछ ! २१ भदौ २०७६
रामेश र जीवन शर्माको नजरमा रायन २१ भदौ २०७६
तीजको लोग्ने लाग्नेले स्वास्नी सम्झियो । किनभने हिजोअस्ति त्यतिखेर खाना खाने समय हुन्थ्यो । खाना सम्झेर लोग्ने भान्छा छिर्यो । बिहान चिया पकाएको भाँडो ग्यासमाथि झिँगा पकाइरहेको थियो । २१ भदौ २०७६
मार्क्स र पुलिस २१ भदौ २०७६
बाबूजी २१ भदौ २०७६
व्यग्र र व्यस्त व्याकुल उनलाई सरकारी जागिर खाने धोको थियो । लोकसेवाको तयारीमा थिए । त्यति नै बेला राष्ट्रिय गानको सर्जक बने । त्यसपछि सरकारी जागिर खाने सपना तुहियो । अब बाँकी समय आफ्नो पढाइ सक्ने र सामान्य नागरिक भएर बाँच्ने उनको योजना छ । २१ भदौ २०७६
संयोगै संयोगले भरिएको भोजपुरे दम्पतीको प्रेमकथा भोजपुरे दम्पतीको प्रेम र विवाह संयोगले जुराएको हो । त्यसैले त जीवन संयोगहरूको फेहरिस्त हो । संयोगको दस्तावेज हो । कथा पढ्दै जानुहोस्, संयोगको संयमित सिलसिला फेला पर्दै जानेछ । २१ भदौ २०७६
अस्ट्रेलियामा भेटिएको नेपाल ! नेपालमा मातातीर्थ औंसी सकिइसकेको थियो । तर, अस्ट्रेलियामा पनि मातापिताको दर्शन गर्ने चाड हुँदोरहेछ । ११ असोज २०७६